ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာ နဲ့ ကွယ်လွန် သွားတဲ့ မိခင်ကြီးရဲ့ နောက်ဆုံး ခရီးကို လိုက်ပို့ ခဲ့တဲ့ MRTV-4 မင်းသမီး စျူးစျူးစျာန်…. – Shwe Naung
ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာ နဲ့ ကွယ်လွန် သွားတဲ့ မိခင်ကြီးရဲ့ နောက်ဆုံး ခရီးကို လိုက်ပို့ ခဲ့တဲ့ MRTV-4 မင်းသမီး စျူးစျူးစျာန်….
ချစ် ပရိသတ်ကြီးရေ ဈူးဈူးဈာန် ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေစတင် ခေတ်စားခဲ့တဲ့ အချိန်ကတည်းက ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ မှာပါဝဝင်ခဲ့သူပါ။ နောက်ပိုင်း ပရ်သတ်တွေ အားပေးချစ်ခင်မှုကိူ အပြည့်အဝရရှိထား တာပါ။
မနေ့က ဒီဇင်ဘာလ၉ရက်နေ့မှာ သူမရဲ့ မိခင်ဟာ ဆုံးပါးသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ မိခင်ကြီးရဲ့ နာရေးသတင်းကိုဝမ်းနည်းစွာ ပြောပြခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့ မှာတော့မိခင်ကြီးရဲ့ နာရေးခရီးကို လိုက်ပို့ရင်း”ဟိုးငယ်ငယ် လေးတည်းက Broken Family ကနေ သားအမိလေး နှစ်ယောက် ဘဝကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားပြီး
ရုန်းကန် ရှင်သန်လာခဲ့တာ …အခုတော့မေမေစျူးကို စိတ်ချသွားပီပေါ့နော် …. မေမေကောင်းရာ မွန်ရာမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ အနားယူနေမယ်ဆို တာစျူး ယုံတယ်နော်…စျူးကိုစိတ်ချနော်..အေးချမ်းပါ စေမေမေ 🙏🙏🙏”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ဝမ်းနည်းစွာ ပြောလာတာပါ။
Broken Familyအဖြစ်သားအမိနှစ် ယောက်ထဲ ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ စျူးစျူးစျာန် ကတော့ အခုဆိူတိုင်ပင် ဖော်တိုင်ပင်ဖက် မိခင်ကြီး ဆုံးပါးသွားလို့ခံစားရတဲ့
ခံစားချက် ကတော့ တကယ်ကို ဝမ်းနည်းစရာပါပဲနော်။ပရိသတ် တွေလည်း စျူးစျူးစျာန် အတွက်အားပေး စကားပြောခဲ့ပ ါဦးနော်။
လူပျိုအသက်ကြီးရင် မချစ်ရတော့ဘူးလား လို့ပြောလာတဲ့ မေလသံစဉ်